တရုတ်နိုင်ငံတွင် ဟိုက်ဒရိုဂျင်စွမ်းအင်သုံး မော်တော်ယာဉ်များတီထွင်ထုတ်လုပ် - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ၏ထိပ်တန်း ကားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း Great Wall Motors (GWM)က နိုင်ငံ၏ စွမ်းအင်သစ်လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်များတီထွင်ထုတ်လုပ်မှုအကြားဟိုက်ဒရိုဂျင်လောင်စာသုံး မော်တော်ယာဉ်များအား တီထွင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။FTXT Technology မှ Marketing Manager Ruan Yiliang က “ကျွန်တော့်ရှေ့မှာရှိနေတာက ဟိုက်ဒရိုဂျင်လောင်စာသုံး မော်တော်ကား အင်ဂျင် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါဟာ ဒီဇယ်အင်ဂျင် တစ်ခုတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ ၊ ကာဘွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ဓါတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကိုလျှော့ချပြီး ကာဘွန်ကင်းစင်တဲ့အထိရောက်နိုင်ဖို့ စွမ်းအင်တွေကိုစုဆောင်းသိမ်းဆည်းပြီးတော့ စွန့်ထုတ်မှုတွေကိုဖြတ်တောက်ပစ်ရပါလိမ့်မယ် ၊ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ အလတ်စားနှင့် ဝန်အားမြင့်ယာဉ်များ မှာ စွမ်းအင်တွေကို အဆက်မပြတ်ပေးနိုင်ဖို့ ဒီလို အင်ဂျင်ကြီးအမျိုးအစားတွေလိုလာပါလိမ့်မယ်၊ လာမယ့်နှစ် ၃၀ အတွင်း ခရီးရှည်မောင်းနှင်ဖို့ ပိုမိုစွမ်းအားမြင့်ပြီးထိရောက်တဲ့စွမ်းအင်တွေနဲ့ ကာဘွန်ထုတ်လွှတ်မှုတွေကို သုံညအထိလျှော့ချနိုင်ဖို့ အတွက်ဆိုရင် ဟိုက်ဒရိုဂျင်လောင်စာသုံး မော်တော်ကား အင်ဂျင်တွေဟာ အာမခံချက်အကောင်းမွန်ဆုံးစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရေးနည်းပညာတွေထဲမှာတစ်ခုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်၊
နောက်ထပ် အဆင့်မြင့်နည်းပညာတစ်ခုကတော့ ဟိုက်ဒရိုဂျင်လောင်စာသုံးယာဉ်များအတွက် ဟိုက်ဒရိုဂျင်သိုလှောင်ကန်များပါ၊ ကန်ရဲ့ အတွင်းပိုင်းမှာ အဖြူရောင်Polymer အလွှာတစ်ခုရယ်၊ အပြင်ဘက် သိုလှောင်ကန် အနားသတ်မှာကာဘွန်ဖိုင်ဘာနဲ့ အနားသတ်ထားပါတယ်၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်သိုလှောင်ကန်ဟာ အလွန်ဘေးကင်းပါတယ်၊ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ဒီကန်ကို မီးလောင်ကျွမ်းမှုဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှုများနှင့် အမြင့်မှ ပြုတ်ကျခြင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများ အကြိမ်ကြိမ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးပြီမို့လို့ပါပဲ၊ နောက်ပြီး သေနတ်ကျည်ဆံတွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးတော့ကိုစမ်းသပ်ထားခဲ့တာပါ။ အဲဒီ ဟိုက်ဒရိုဂျင်သိုလှောင်ကန်တွေကို ဟိုက်ဒရိုဂျင်လောင်စာသုံးယာဉ်တွေမှာတပ်ဆင်မောင်းနှင်တဲ့အခါမှာလည်း ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိဖို့အပြည့်အဝ အာမခံနိုင်ပါတယ်၊” ဟုဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၌ ပထမနှစ်ဝက်ကာလအတွင်းလျှပ်စစ်ကားရောင်းချရမှုထက်ဝက်မက တိုးမြင့်လာခဲ့ပြီး ဝယ်လိုအားကိုပြည့်မီရန် ထုတ်လုပ်မှုလည်းတိုးတက်လာခဲ့သည်။
နှစ်အလိုက် လျှပ်စစ်ကားရောင်းချရမှုမှာ ၂၀၁.၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်လာပြီး ဇန်နဝါရီမှ ဇွန်လအထိ လျှပ်စစ်ကားရောင်းချရမှုမှာ၁.၂ သန်းကျော်ရှိခဲ့ရာ ၂၀၁၉ တစ်နှစ်လုံးလျှပ်စစ်ကားရောင်းချခဲ့ရသည့်ပမာဏ နှင့် ညီမျှခဲ့သည်။ (Xinhua)
GLOBALink | Chinese automaker developing hydrogen fuel cell vehicles
BAODING, July 20 (Xinhua) — Great Wall Motors (GWM), China’s leading sport utility vehicle and pickup manufacturer, is developing hydrogen fuel cell vehicles amid the country’s new energy vehicle (NEV) boom.
Sales of new energy vehicles (NEVs) in China more than doubled in the first half of the year as production and demand continued to recover, data from the China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) showed on Friday.
Total NEV sales grew 201.5 percent year on year to reach over 1.2 million in the January-June period, equal to total sales in 2019, the CAAM data shows.